समाचार - भविष्यमा सफल चिनियाँ उत्खनन उद्योगलाई के हुन्छ?
बजार बढ्न जारी छ।
चीन निर्माण मशीनरी उद्योग संघको उत्खनन मेसिनरी शाखाबाट प्राप्त तथ्या ;्कले देखाउँदछ कि जनवरी-फेब्रुअरी २०२० मा, चीनको घरेलु उत्खनन बिक्री year 46..5% वार्षिक बर्षमा घट्यो; यद्यपि बजार चाँडै खस्ने बन्द भयो र मार्चमा पुन: प्राप्ति भयो। मार्चमा बिक्री वार्षिक आधारमा ११.२% ले वृद्धि भयो। मासिक बर्षको उच्च वृद्धि दर क्रमशः अप्रिल र मेमा .5 64..5% र .3 76..3% पुगेको छ र वार्षिक मासिक वृद्धि दर जनवरी-मेमा १ .3 ..3% पुगेको छ।
"यो आशा गरिएको छ कि २०२० को पहिलो छमातमा चीनमा उत्खनन गर्नेको घरेलु बजार बिक्री रेकर्ड उच्च हुनेछ।" चीन निर्माण मेशीनरी उद्योग संघको उत्खनन मेसिनरी शाखाका अध्यक्ष होang्ग मिनले त्यस्तो निर्णय सुनाए।
विदेशका सामान्य गिरावट र चीनको निर्यातको बारेमा लुकेका चिन्ताहरू
चीनको बाहिरको विश्व बजारमा स्थिति यति राम्रो छैन।
युरोप, अमेरिका र जापानका निर्माण मेसिनरी उद्योगहरूले औद्योगिक चक्र पतनको अवधिमा प्रवेश गरेको तथ्यसँगै यो महामारीले प्रभावित भएको छ। जनवरीदेखि अप्रिल २०२० सम्ममा चीन बाहेक उत्खननको विश्वव्यापी माग १ 13..4 प्रतिशतले घटेको छ। थप रूपमा, वर्तमान विदेशी महामारी स्थिति अझै अनिश्चित छ। सन् २०१० मा विश्व खुदाई बजारमा तीव्र गिरावट आउने सम्भावना छ। महामारी समेटिए पछि पनि सीमित वृद्धिको गति र विदेशमा विशेष गरी विकसित क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार लगानीको लागि स्थानको कारण बजारले बदला लिने सम्भावना भने देख्दैन। " Huang Min भने।
अन्धकारमय विश्वव्यापी बजारबाट प्रभावित, विगत दुई वर्षमा द्रुत बृद्धि भएको निर्यात बजारले पनि सुस्त हुने संकेत देखाएको छ। २०१ In मा, चीनको उत्खनन निर्यात वार्षिक आधारमा%%% ले वृद्धि भयो। जनवरी र फेब्रुअरी २०२० मा बजारले द्रुत बृद्धि मनोवृत्ति कायम राख्यो, जुन वार्षिक आधारमा respectively 35..3% र .5२..5% ले बृद्धि भएको छ। यद्यपि मार्चमा विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपसँगै निर्यात बजारको वृद्धि दर लगातार गिरावट आएको छ। मार्चमा वार्षिक मासिक बृद्धि दर १ 17. fell% मा झरेको छ र अप्रिल र मेमा वार्षिक आधारमा वृद्धि दर ०.9% र %.3% मा झरेको छ। जनवरीदेखि मेसम्मको संचयी निर्यात बिक्री वृद्धि पनि २०.%% मा झरेको छ।
तथ्या show्कले देखाउँदछ कि जनवरीदेखि अप्रिल २०२० सम्म, चिनियाँ ब्रान्ड खुदाउनेको निर्यात वार्षिक आधारमा १ 17..7% ले वृद्धि भएको छ, जसमध्ये युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको परिपक्व बजारबाट हुने निर्यातमा वार्षिक आधारमा २%% ले वृद्धि भएको छ, र निर्यातबाट उभरते बजारहरुमा वर्षको आधारमा २१% ले वृद्धि भयो। "समग्रमा, यो आशा गरिएको छ कि २०२० मा चीनको उत्खनन निर्यात बिक्री सम्भवतः २०१ in मा जस्तै हुनेछ।" Huang Min भविष्यवाणी।
देश र विदेशमा उत्खनन बजारको विकास ध्रुवीकरण गरिएको छ, जसले विश्वव्यापी उत्खनन उद्योगमा ठूला परिवर्तनहरू ल्याइरहेको छ।
वास्तवमा परिवर्तनहरू लामो समयदेखि ट्रेस गरिएको छ।
सबैभन्दा पहिले, चीनमा, विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्खनन बजार, "केक" को विभाजन परिवर्तन भएको छ। विगत १० बर्षमा चिनियाँ खुदाई गर्ने कम्पनीहरूले 3-4- generation पुस्ता उत्पादन अपग्रेड र टेक्नोलोजीको संचयमा भर परेका छन कि उनीहरूले २०१० मा market०% भन्दा कम गरी आज 70०% मा बढाए। यसको विपरित, चिनियाँ उत्खनन बजारमा लामो समयसम्म प्रभुत्व जमाइरहेका विदेशी ब्रान्डले केटरपिलर, कोमात्सु, हिताची, डुसन, भोल्भो, ह्युन्डाइ आदिलाई छोडेको छ, जसमा अझै ठूलो हिस्सा रहेको छ, अन्य कम्पनीहरूले लामो समयदेखि चीनमा गिरावट आएको छ। यो झन् झन् निश्चित हुँदै गइरहेको छ कि चिनियाँ उत्खनन बजारमा स्थानीय कम्पनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ शिविर गठन भइरहेको छ।
चीन बाहेक, विश्वमा विशेष गरी युरोप, अमेरिका र जापानमा संकुचित मागले पनि विदेशी ब्रान्डमा पर्याप्त दबाब ल्याएको छ। २०१ 2019 को चौथाई क्वार्टरमा शुरू गर्दै, यूरोपीयन, अमेरिकी र जापानी निर्माण मेशीन उत्पादकहरूको प्रदर्शनमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। सार्वजनिक जानकारीका अनुसार २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा महामारीले यस प्रवृत्तिलाई बढाएको छ - विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्माण मेसिनरी उत्पादक क्याटरपिलरले यसको निर्माण मेसिनरी व्यवसायमा वार्षिक रूपमा २१% र खनन मेसिनरी व्यवसाय २ 24% घटेको छ। -on-Year।
चिनियाँ र बहुराष्ट्रिय खुदाई उत्पादकहरूको पैमानेमा परिवर्तनले वैश्विक उत्खनन उद्योग "रैंकिंग" को फेरबदलको अर्को दौर सुरु गरेको छ। नयाँ औद्योगिक बान्कीको गठनको गति छ।
चीन बजार, स्केल जीत
चीनको उत्खनन बजार टेक्नोलोजी र उत्पादनहरूमा विश्वास गर्दछ, तर अधिक मापमा; सबै पछि, सम्पूर्ण निर्माण मेसिनरी उद्योगमा, खुदाई गर्नेहरू आफैंमा एक स्केल उन्मुख क्षेत्र हो, र केवल उत्पादन र प्रविधिको फाइदा वास्तविक स्केलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ जसले बदलीमा कम्पनीको थप टेक्नोलोजिकल पुनरावृत्ति, उत्पाद अपग्रेड र लागत नियन्त्रण लाई बढावा दिन सक्छ। त्यो कम्पनीको विकास सद्गुण सर्कलमा प्रवेश गर्दछ। स्केल बिना, यो ठूलो हुन असम्भव छ, बलियो हुन एक्लै छोड्नुहोस्।
विगत १० बर्षमा चीनको उत्खनन उद्योगको विकासलाई हेर्दा, केवल ठूला कम्पनी जसले ठूलो मात्रामा खन्न र उत्पादन, टेक्नोलोजी र अन्य सूचकमा धेरै तीरहरू लिएका छन् आज मात्र सफलतापूर्वक पुगेको छ र अझै नेतृत्वमा छन; अन्यथा, तिनीहरूसँग मात्र उत्पादहरू छन्। फाइदा, ब्रान्ड सुविधाहरू, र सर्कलको वास्तविक साझेदारी नगर्ने कम्पनीहरू, यो भन्न गाह्रो छ कि चिनियाँ उत्खनन बजारको अन्तिम फसल। "अझ कडा प्रतिस्पर्धाको साथ, भविष्यमा चीनको उत्खनन उद्योगको बजार एकाग्रता निश्चित रूपले उच्च हुनेछ, र ओलिगोपाली प्रभाव बढी प्रख्यात हुनेछ।" हुआंग मिन यसमा विश्वस्त छन्।
विश्वव्यापी महामारी र औद्योगिक चक्रको प्रभावमा तपाईको विचारमा २०२० मा चिनियाँ खुदाई बजार कस्तो देखिन्छ? २०२० को पहिलो आधामा, के यो बजारलाई नयाँ उचाइमा पुग्न सम्भव छ?
हुआang मिन: घरेलु महामारीको क्रमिक नियन्त्रणको साथ, उत्खननकर्ताहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्माण मेसिनरी उद्योगको माग द्रुत गतिमा बढेको छ। जनवरी देखि मे सम्म, घरेलू खुदाई बिक्री वार्षिक आधारमा १ .3 ..3% ले वृद्धि भयो। २०२० सरकारको कार्य प्रतिवेदनले औंल्यायो कि समन्वय र संवर्धन महामारी रोकथाम र नियन्त्रण र आर्थिक र सामाजिक विकास, स्थिरता कायम राख्दै प्रगति खोज्ने सामान्य लहरको पालना गरी, र आन्तरिक माग विस्तार गर्ने रणनीति दृढतापूर्वक लागू गरियो। हालको म्याक्रो-नियन्त्रण नीतिहरूले बल दिन जारी राख्छ, र औद्योगिक बहालीको प्रगति द्रुत गतिमा हुन्छ। गिरावट को दर बिभिन्न डिग्री मा संकुचित छ। ती मध्ये, लगानी अपेक्षाकृत चाँडै पल्टाउने छ। घर जग्गा र पूर्वाधारमा लगानीको उत्थानले उत्खनन उद्योगको विकासलाई कडा रूपमा बढावा दिएको छ। यो आशा गरिएको छ कि २०२० को पहिलो आधामा चीनको घरेलु उत्खनन बजारले उच्च रेकर्ड गर्नेछ।
२०२० मा, तपाईलाई कसरी लाग्छ विश्वव्यापी खुदाई बजार चीन भन्दा बाहिर विकसित हुनेछ? विशेष गरी युरोपियन, उत्तर अमेरिकी र जापानी बजारमा सन् २०२० को दोस्रो छमातमा महामारी बिस्तारै नियन्त्रण हुने भएकोले के यी बजारहरूले बदला लिने बृद्धि गर्न सम्भव छ?
हुआang न्यून: महामारीको विस्तार र शेयर बजारको व्यापक उतार चढावको दोहोरो झटका अन्तर्गत प्रमुख विदेशी अर्थतन्त्रहरूको वृद्धि गतिमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। चीन र कम आय भएका विकासशील देशहरू बाहेक जसले सुस्त बृद्धि गर्दै छ, विश्वव्यापी अर्थतन्त्रहरू मूलतः मन्दीमा फसेका छन्। महामारीबाट प्रभावित, विदेशी उत्खनन उद्योगको माग जनवरीदेखि अप्रिल २०२० सम्म १ 13..4% ले घटेको छ। विदेशी OEM र डाउनस्ट्रीम उद्योगहरूले बन्द र उत्पादन कटौतीको अनुभव गरेका छन्। विदेशी महामारीको वर्तमान स्थिति अझै अस्पष्ट छ। २०२० मा वैश्विक खुदाई बजार तीव्र गतिमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। युरोप, उत्तरी अमेरिका र जापान महामारीको सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र हो र उद्योग गिरावट अझ गम्भीर हुनेछ। आपूर्ति श्रृंखलामा विश्वव्यापी महामारीको प्रभावको साथ, यसले उत्खननकर्ताको ब्रान्ड संरचना परिवर्तन गर्दछ। २०२० मा उत्खनन उद्योगमा प्रतिस्पर्धा अधिक तीव्र र क्रूर हुनेछ। बिक्री मापन प्रतियोगिता को मूल हो। २०२० को दोस्रो छमाहीमा, महामारी बिस्तारै नियन्त्रणमा आयो भने पनि, विदेशी बुनियादी पूर्वाधार लगानी जस्ता विकास गति सीमित हुनेछ, र विदेशी बजारहरूले बदला लिने बृद्धि हुने अपेक्षा गर्दैन।
२०२० मा चीनको उत्खनन निर्यातमा विदेशी बजारमा भएको उतार चढावले कस्तो असर पार्छ? कुन आकार र स्तर तपाईंलाई लाग्छ कि चीनको उत्खननको निर्यात बिक्री २०२० मा हुनेछ?
हुआang मिन: एकतर्फ युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूमा महामारीको फैलावटले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई नै मन्दीको अवस्थामा पुर्‍याएको छ। शिपिंग रसद, कर्मचारीहरूको गतिशीलता, र व्यापार संचारले अवरोधहरू सामना गरेको छ, र विदेशी उत्खनन मेसिनरी बजार माग पनि घटेको छ। अर्कोतर्फ, विदेशी निर्माण मेशिनरी उत्पादन कम्पनीहरूले महामारीका कारण उनीहरूको उत्पादनमा गम्भीर असर पारेका छन जसले केही हदसम्म चिनियाँ उत्खननकर्ताहरूको निर्यात माग बढेको छ। यस वर्षको जनवरीदेखि अप्रिलसम्म, चिनियाँ ब्रान्डको खुदाई गर्ने वस्तुहरूको निर्यात वार्षिक आधारमा १.7..7% ले वृद्धि भएको छ, जसमध्ये परिपक्व बजार २ 26% र उदीयमान बजार २१% ले बृद्धि भएको छ। वर्तमान विदेशी महामारी स्थिति अझै अस्पष्ट छ। यो आशा गरिएको छ कि २०२० मा चीनको उत्खनन निर्यात बिक्री अघिल्लो वर्षको जस्तै हुनेछ।
चिनियाँ खुदाई उत्पादकहरू हालका वर्षहरूमा द्रुत रूपमा विकसित भएको छ, र चिनियाँ उत्खनन उत्पादन र प्रविधिहरू पनि द्रुत र निरन्तर सुधार भएको छ। तपाईंको विचारमा, चिनियाँ उत्खनन उत्पादनहरू र चिनियाँ उत्खनन उत्पादन स्तरको अग्रणी बेन्चमार्कको साथ बेंचमार्किंग प्रक्रियामा हामीले कुन पक्षहरूलाई सुदृढ पार्नु आवश्यक छ?
हुआang मिन: हामीले अझै धेरैलाई सुदृढ पार्नु आवश्यक छ, जस्तै ग्राहकको आवश्यकता र टेक्नोलॉजिकल फ्रन्टियर्सको सामना गर्दै, वैश्विक अनुसन्धान र विकास क्षमताहरूको प्रबर्धन, र ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने उत्पादनहरू द्रुत रूपमा सुरूवात गर्न; टेक्नोलोजी र लागतमा फाइदा सिर्जना गर्न विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला र उत्पादन प्रणालीको पुन: कल्पना गर्दै; सामान र सेवा क्षमताहरूको सुधारले निरन्तर उच्च ग्राहक सन्तुष्टि प्राप्त गरेको छ।
आगामी -5--5 बर्षमा, चीनको उत्खनन उद्योगको प्रतिस्पर्धामा के नयाँ प्रवृत्ति र नयाँ प्रवृत्ति देखा पर्नेछ?
हुआang न्यून: बजार चक्रीय रूपमा बढ्दै छ र स्थिर राज्यमा फर्कन्छ। पूर्वाधार लगानीले स्थिर आर्थिक बृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरेको छ, र प्रमुख परियोजनाहरूमा लगानीको गति बढाइएको छ; पुरानो उपकरणहरूको त्वरित प्रतिस्थापन प्रबर्धन गर्न वातावरणीय संरक्षण र उत्सर्जन आवश्यकताहरू अपग्रेड गरिएको छ।
उद्योग प्रतिस्पर्धा तीव्र भयो र यो फेरबदलको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। खुदाई मूल्य युद्ध उद्योग मा व्यापक मूल्य प्रतिस्पर्धा को एक नयाँ दौर को नेतृत्व गरेको छ; उद्योग एकाग्रता उच्च छ, र ओलिगोपाली प्रभाव प्रमुख छ; उद्योग फेरबदल को एक नयाँ दौर गति, र कमजोर ब्रान्डहरु हटाईन्छ।
बुद्धिमान र डिजिटल रूपान्तरण। इन्टरनेट अफ थिंग्सको अनुप्रयोगको साथ, ठूलो डाटा, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उद्योग खुफिया र डिजिटल रूपान्तरण द्रुत गतिमा छन्; उत्पादन उत्पादन बुद्धिको लागि रूपान्तरण हुँदैछ, र मार्केटिंग सेवाहरू डिजिटलमा परिवर्तन हुँदैछन्।